နိုင်ငံတကာက ဟပ္ပီးနယူးရာ လက်ရွေးစဉ်ဓာတ်ပုံ – 2015 HAPPY NEW YEAR! – ၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » နိုင်ငံတကာက ဟပ္ပီးနယူးရာ လက်ရွေးစဉ်ဓာတ်ပုံ – 2015 HAPPY NEW YEAR! – ၅	4
နိုင်ငံတကာက ဟပ္ပီးနယူးရာ လက်ရွေးစဉ်ဓာတ်ပုံ – 2015 HAPPY NEW YEAR! – ၅
Posted by Kyaemon on Feb 3, 2015 in Arts & Humanities, Education, Environment, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |4comments
တောင်အမေရိက Mexico မက်စီကိုနိုင်ငံ
ကျန်တာတွေကတရုပ်ပြည်မ က ပါ
တရုပ်ပြည် ရှန်ယန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ရောက် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ
၂၀၀၈ အိုလံပစ်က ငှက်သိုက်ပုံအားကစားရုံမှာနှစ်သစ်ကူးပွဲကျင်းပ
ချုံကင်းမြို့လယ်ကွင်း မှာနှစ်သစ်ကြိုစုဝေးပြီး မိုးပျံ ဘော်လုံးလွှတ် ——
အန်ဟွေကကျောင်းသူကျောင်းသား အ “က” နဲ့ကြို
မြောက်ပိုင်းတရုပ်ပြည် ဟာဘင်က မီးပုံးပျံ လွှတ်ပြီးကြို
ဟူနန်ပြည်နယ် ချန်ရှာမြို့ မြစ်ဆိပ်ကမ်းနားမီးပန်းနဲ့ကြို
မာကအို Macau မှာ
kai says: မကြာခင် စိန့်တိုင်းပြည်ရဲ့ နှစ်သစ်လာမယ်..။
ပြီးရင်.. ဧပြီမှာ မြန်မာတွေ နှစ်သစ်လာမယ်…။
ပျော်စရာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (တရုပ်ပြည် ရှန်ယန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ရောက် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ)
ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ အတော်သဘောကျမိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: လှလှ။
အလင်းဆက် says: အပေါ်က ရေတွက်ရင်…နံပါတ်သုံး ပုံလေးက..
ရိုက်တဲ့သူတော်တယ်နော… မြင်ကွင်းအတွက်.. နေရာယူပုံပြောပါတယ်..